लाओसमा २ मात्र बाघ, नेपालको संरक्षण आसलाग्दो « Tuwachung.com
६. ‘महिलाले त लेख्न पाए पो, लेख्यो भने चरित्रमाथि आक्रमण भइहाल्छ’
७. ‘रातकी रानी’ खेतीमा रमाउँदै पूर्वमन्त्री विष्ट
८. प्रत्येक स्थानीय तहमा स्तनपान कक्ष स्थापना
९. कटारी झर्दा–फर्कंदा गाउँले तिप्पा लडेको भीरमा ठमठम
१०. गीतकार मेयर : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नगरगान तयार
११. चारतारे झन्डा फरर्र मदनको आँसु बरर्र
१२. पृथ्वीकै प्राचीन मानव बस्ती पेकिङ
लाओसमा २ मात्र बाघ, नेपालको संरक्षण आसलाग्दो
भीष्मराज ओझा	२०७७ श्रावण १४, २२:१७
काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण बुधबार नेपालमा सामान्य रूपमा विश्व बाघ दिवस मनाइयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिवसका अवसरमा सरोकारवाला सीमित व्यक्तिको सहभागितामा केन्द्रीय कार्यक्रम बबरमहलमा आयोजना गरेको थियो । यसबाहेक बाघ पाइने चितवन, पर्सा, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि स्थानीयस्तरको कार्यक्रम गरेको विभागले जनाएको छ ।
सन् २०१० मा रूसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले सालिन्दा २९ जुलाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरेअनुरूप बुधबार नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको थियो ।
नेपालले संवत् २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ । नेपाललगायत विश्वका १३ देशमा पाटेबाघ पाइन्छ । विश्वमा बाघ पाइने १३ मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको सेन्ट पिटर्सवर्ग सम्मेलनले बाघको संख्या सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या १२१ लाई दोब्बरभन्दा पनि बढी २५० वयस्क बाघ पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल हुने दिशामा नजिक रहेको विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले गत वर्ष पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ गणना २०१८ को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त गणनाअनुुसार नेपालमा बाघको संख्या २३५ पुगेको छ । तीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९३, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ८७, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा २१, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १८ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् मध्यवर्ती र आसपासका वनक्षेत्रमा १६ बाघ भेटिएका थिए । यस गणनाक्रममा क्यामेरामा देखिएका बाघका बच्चाको संख्या नसमेटिएकाले सन् २०२२ मा नेपालको लक्ष्य पूरा हुने निश्चित देखिएको उनले दाबी गरे ।
विभागले पर्सादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रमा आधुनिक क्यामेराको प्रयोगले सन् २०१७ डिसेम्बर १ देखि सन् २०१८ अप्रिल ३ सम्म पछिल्लो बाघ गणना गरेको थियो । नेपालमा बाघको संख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा १९८ रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपालमा बाघ संरक्षणमा देखिएको सफलता र यसको संख्यामा भएको वृद्धिलाई विश्व समुदाय नै प्रशंसा गरेको छ । नेपालको तराई–भूपरिधि क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरिएको १६ हजार १६१ वर्गकिमि क्षेत्रमध्ये ११ हजार ५७ वर्ग किमि (६८ प्रतिशत) मा बाघको उपस्थिति रहेको देखिएको छ । बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमध्ये ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा बाघको उपस्थिति रहेको देखिएको छ । संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको बाघ पाइने क्षेत्रमध्ये ६० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सो प्रजातिको उपस्थिति रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मुलुकले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा आसलाग्दो उपलब्धि हासिल भएकाले र बाघ गणनाको पछिल्लो नतिजाले पनि सन् २०२२ मा बाघको संख्या दोब्बर (२५० वयस्क बाघ) पुर्याउने मुलुकको प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास गरिएको छ । तर, बाघको चोरी सिकार, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन अतिक्रमणसँगै बासस्थान र आहारामा देखिएका कमीले बाघ संरक्षणमा चुनौती कायमै छ ।
विश्वभर बाघको सङ्ख्या तीन हजार ८९० रहेको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भारतमा दुई हजार २२६, सबैभन्दा कम लाओसमा बाघको संख्या दुई छ । इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, भियतनाम, मलेसिया, म्यान्मा, रसिया र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छ ।
‘महिलाले त लेख्न पाए पो, लेख्यो भने चरित्रमाथि आक्रमण भइहाल्छ’
हामीलाई दुई चिर्कटो दिइएको छ । एउटाले बत्ती बल्छ र अर्कोले भर्याङ र ढोका खोल्न
(श्री ३) सर्वधन राई
मझुवाबेंसी सेरैमा भेट भैयो धेरै–धेरैमा यसै लोकवाणिबाट लेख आरम्भ गर्छु । संवत् २०२९ सालको कुरा
दम, मुटु, ग्यास्ट्रिक, चर्मरोग निको पार्ने विजयसाल
गोदावरी (कैलाली) । बहुउपयोगी बिरुवाका रूपमा चिनिने लोपोन्मुख प्रजातिको विजयसाल संरक्षणमा उपभोक्ता जुटेका छन्
पृथ्वीकै प्राचीन मानव बस्ती पेकिङ
बेइजिङलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वमा दूतावाससहित सरकारी कार्यालय छन् । उत्तरी खण्डमा
स्तनपान नगराइएका बच्चा झगडालु
चितवन । आमा र शिशु दुवैका लागि स्तनपान महत्वपूर्ण हुने गर्छ । आमाको दूध शिशुका
अधिकांश कार्यालय स्तनपान कक्षविहीन
टीकापुर (कैलाली) । टीकापुर नगरपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राधा चौधरीको डेढ वर्षको बच्चा छ ।
सुन्दर अनुहारले आत्मविश्वास बढाउने
अनुहारले व्यक्तित्व झल्काउँछ । अनुहार सुन्दर छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको आत्मविश्वास बढ्छ । आफू